Nepal Samaya | सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्दै अनुपम र परिणीती
सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्दै अनुपम र परिणीती
काडमाडौं- दुई सातायता भारतीय फिल्म ‘उचाइ’ को छायांकन नेपालको हिमाली भेगमा भइरहेको छ। काठमाडौंमा दुई दिनको छायांकन सकाएर हिमाली भेगतर्फ प्रस्थान गरेको टोलीले लुक्लामा छायांकन सकाएर नाम्चेमा छायांकन गरिरहेको छ।
यसैक्रममा मंगलबार ब्रेकमा रहेका कलाकारहरूले नाम्चेमा पुगेर सगरमाथाको दृश्यावलोकन गरेका छन्। फिल्मका कलाकारहरू अनुपम खेर, परिणीती चोपडाले पहिलोपटक सगरमाथा देखेको भन्दै समाजिक सञ्जालमा खुशी साटेका छन्। परिणितीले आधार शिविर पुगेको फोटोसहित उनले लेखेकी छिन्, ‘शसभ प्रभात मिस्टर एभरेस्ट। तिमीले आज मलाई नम्रताको पाठ सिकायौं।’
साथै, सगरमाथा सामु जो कसैको शिर झुक्ने भन्दै अनुपमले सगरमाथाको सौन्दर्यको वर्णन गरेका छन्। उनले पहिलोपटक सगरमाथाको अवलोकन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त समेत गरेका छन्।
बलिउड निर्देशक सुरज वर्जत्यले निर्देशन गरिरहेको फिल्मको सुटिङका लागि अनुपम खेर, परिणिती चोपडा, बोमन इरानीलगायतका कलाकार नेपालमा छन्। फिल्म युनिट आगामी साता हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा जाने भएको छ। उचार्इ फिल्म युनिट नेपालमा लगभग ४० दिन रहने छ।
माउंट एवरेस्ट के कदमों में पहुँच कर शीश खुदबखुद झुक जाता है। Humbled by the MAJESTIC #MountEverest!! आप लोग भी दर्शन करलो।Jai Ho!! 🙏😍🙏 #UunchaiTheFilm pic.twitter.com/ZQ7b5iTp8i
प्रकाशित: October 13, 2021 | 20:40:00 काठमाडौं, बुधबार, असोज २७, २०७८
सञ्जय र सलमानले ‘हम दिल दे चुके सनम’जस्ता फिल्म पनि दिएका छन्। त्यसपछि उनले सँगै काम गरेका छैनन्। सलमानले सञ्जयको फिल्म ‘सावरिया’मा केमियो भने गरेका थिए।
कंगना राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हल्लाले गर्माएको बलिउड
अक्सर चर्चामा आइरहने बलिउड अभिनेत्री हुन्, कंगना रनौत। अहिले कंगना राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चर्चाले बलिउड गर्माएको छ।
डान्सिङ रियालिटी शो 'सुपर डान्सर'को च्याप्टर ४ को उपाधि फ्लोरिना गोगोइले जितेकी छन्। उनले अन्तिम ५ मा रहेका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै उपाधि जितेकी हुन्।
फिल्मका इभेन्टसँगै छायांकनमा जाने तयारीमा फिल्मकर्मी जुटेका छन्। यसै क्रममा आउँदो ३ कात्तिकदेखि 'कबड्डी'को चौथो भागको छायांकन प्रारम्भ हुने भएको छ। अन्तिम भनिएको ‘कबड्डी’ शृंखलाको चौथो भागलाई दर्शकले हेर्न पाउनेछन्।
'गड मदर' भन्दै कंगनाले रेखालाई दिइन् जन्मदिनको शुभकामना
सोही अवसरमा अर्की अभिनेत्री कंगना रनावटले एक पोस्ट गर्दै रेखालाई आफ्नो ‘गड मदर’ भनेकी छन्। अहिले बलिउडमा यो कुराले चर्चा पाएको छ।